CC Shakuur: Taliska NISA hala bedelo, siyaasaduu ku milmay | KEYDMEDIA ONLINE
CC Shakuur: Taliska NISA hala bedelo, siyaasaduu ku milmay
Tan iyo markii Fahad Yaasiin loo dhiibay NISA, waxay hay'adda noqotay meel ay Al-Shabaab si aad ah ugu milantay lagana maleeggo dilalka siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka Wadajir C/raxmaan Cabdishakuur, ayaa sheegay in loo baahan yahay isbedel in lagu sameeyay taliska hay'adda NISA, oo uu ku eedeeyay inay ku milantay siyaasadda dalka, islamarkaana ay qabtay howsheeda sirdoon.
"Hay’adaha amniga dalka, gaar ahaan hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Hay'adda waxaa loo rogay hay'ad siyaasadeed shaqadeedii aasaasiga ahayd ee la dagaallanka argagixisanimada ayaa ka leexatay," ayuu yiri CC Shakuur.
Isagoo ka hadlay shir jaraa'ib oo uu Maanta ku qabtay Muqdisho, Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya ayaa xusay in Hoggaanka NISA uu caado ka dhigtey faragelinta siyaasadda, caburinta saxaafadda & siyaasiyiinta ka feker duwan Farmaajo. Si loo xaqiijiyo amniga doorashada, waxuu codsaday in qaab-dhismeedka taliska NISA dib u habeyn lagu sameeyo.